Global Voices teny Malagasy » Libya: Manainga Ireo Mpitsoa-Ponenana Raha Toa ka Tonga Tsikelikely Kosa Ny Fanampiana Amin’ny Maha-Olona sy Ireo Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2011 18:54 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Vaovao Mafana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ny tatitray manokana momba Fitroarana Libia 2011 .
Raha mbola mitohy miraikitra amin'ny fitondrana ilay jadon-dahy Libiana Muammer Al Gaddafi, mamono ireo mpanao fihetsiketsehana mijoro manohitra azy amin'ny fomba faran'izay henjana sy feno habibiana tsy fahitra hatrizay, ny laharan'ireo olona mitsoa-ponenana miala an'i Libia kosa mitombo hatrany. Ary raha mitohy miakatra hatrany ny salan'isam-pahafatesana, tonga mitsitaitaika ao amin'ny firenena kosa ny fitondràna fanampiana sy ireo mpanao gazety.
Olon-tsotra nambara fa naratra sy maty tao an-tanànan'i Al Baida sy Bengasi, Libia. Sary avy amin'i Palmina C Appussi, fizaka-manana Demotix (19/02/11).
Ity fantina iray tao aamin'ny Twitter mikasika ny asa fanavotana, amin'ny lafiny iray, ary ny asa fanampiana amin'ny maha-olona sy ny fitsitaitakan'ireo mpanao gazety:
@miguelmarquez:  Niala ny seranan-tsambo Libiana ihany nony farany ny sambo mpitatitra olona Maria Dolores ahitàna Amerikana 167 sy olona hafa firenena 118. Fiatoana manaraka ny any Valletta
@aratweets:  Rehefa nijanona teny anaty rano hatramin'ny Alarobia, nandao an'i #Tripoli  ilay sambo mpitatitra olona Maria Dolores handeha ho any #Malta … Isan'ireo nalefa taminy ny namako iray. #Libya 
@SimonKSayz:  Tsara izany na ho inona na ho inona hoy aho. »»»Tambatambazan'i Gande Bretagne ireo mpiasam-bahoaka Libiana mba hanampy amin'ny famoahana an'ireo teratany Anglisy http://bit.ly/fQrKe4 
@thomaslydon:  @britishabroad  Azonao amarinina ve fa nitondra teratany Anglisy 42 niala an'i Tripoli ilay sambo Amerikana mpitatitra olona Maria Dolores? #Libya 
@sunnycoyelkar:  Miteny ny governemanta Indiana fa handefa sidina roa isan'andro miainga avy ao Libia mba hamoahana ireo terataniny……..FANANTENANA. FANAVOTANA.
@naveenks:  Mitady fanampiana amin'i India i Sri Lanka amin'ny hamoahana ireo terataniny miisa 1200 eo mipetraka manerana an'i Libia http://bit.ly/eY1hVS  @acorn 
@Refugees:  Any amin'ny 22.000 any olona nifindra nankany #Tunisia  avy any #Libya  hatramin'ny Alatsinainy. Toniziana amin'ny ankamaroany. Fihetsika manohina ny fo, Toniziana manolotra fanampiana, fandraisana mahafinaritra + matihanina
@allawati:  Tafapetraka ato amin'ny fitodiam-piaramanidina Alex. Burg al Arab misy Toniziana anjatony nandositra an'i Libia. Nitondra fiara avy any niatsinanana avy any Benghazi ry zareo mba handray fiaramanidina ho any andrefana ho any Tonizia
@matchbox20:  #Qaddafi #Libyan  Mandrahona ireo #ejiptiana  & #Toniziana  tao amin'ny fitodiam-piaramanidina mba hamela azy ireo hiditra fa raha tsy izany dia hosamborina ry zareo #Libya 
@Heyett: #Libya . Nanangona fitaovam-pitsaboana sy sakafo ireo Toniziana androany mba hanampiana ny vahoaka Libiana.
@OnlyOneLibya:  Tatitra mikasika hatsaram-panahy MAHAZENDANA avy amin'ireo Toniziana manakaiky ny sisintany Libiana ho fanampiana ireo rahalahy/anabavy Libiana. Misaotra anareo!! #Tunisia  #Libya 
@SallyShafi:  Fitaovam-Pitsaboana fandidiaba ilaina ho an'i #Libya  apetraka ao an-kianjan'i mustafa mahmoud ao mohandessen hiandry ny fitaterana azy.
@tel4rent:  Vokovoko Mena avy any Finlande nankany Libia: Mpiasan'ny fahasalamana telo avy amin'ny Vokovoko Mena avy any Finlande nankany … http://dlvr.it/HZHz0  #charity  #tel4rent 
@hadeelalsh:  miandrandra zavatra toy izay ao Tripoli ” @bencnn  manda tsy handray ny volan'ireo mpanao gazety ny tompona tranombarotra ao Benghazi. Faly tsotra izao fotsiny manana anay eto. #Libya 
@IHHen:  Niditra an-tsehatra ao #Libya  avy any #Egypt  ny tariky ny IHH miaraka amina dokotera 35 ny fanampiana amin'ny maha-olona hanampiana ny mponina sy ny mpizahatany
@Dima_Khatib:  Tsy avelan'ny fitondrana handrakotra ny zava-mitranga ao Tripoli sy ny famoretana ataony amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpanao gazety vahiny #Libya  #feb17 
@alexialia:  Faritra misy ady amin'izao fotoana ny seranan-tsambon'i #Benghazi , #Libya . ” Fihinin'ny olona aho ho fisaoran'izy ireo ny mpanao gazety amin'ny fandrakofana ny vaovao ataon'izy ireny”
@maqam:  Loharano avy any ifotony ao #Libya : Fanadiovana faobe izao ao #Tripoli  no ataon'ireo hery mpomba an'i #Gaddafi  mialoha ny hahatongavan'ireo mpanao gazety vahiny. #Feb17 
@pressfreedom:  Ao #Libya , Saif al-Islam milaza fa misokatra ho an'ireo vahiny mpanao gazety ny firenena. Avy eo tafihany ny mpampahalala vaovao Arabo. http://bit.ly/gVVyIf  #Feb17 
@lucyproctor:  leo mamaky ireo mpanao gazety/tonian-dahatsoratra mitanisa ny fidirany ao Libia – ambarao anay fotsiny izay tena zava-mitranga, asanareo ny miditra any
@nazaninemoshiri:  #Libya  #Tunisia : Tafaverina eto amin'ny sisintany ar Ras Jedir. Tsy mbola misy fahafahana miditra ho an'ny Mpanao gazety aloha.
@yassayari:  #Libya : namoaka fatwa ireo #Cleric [mpitarika fivavahana] handraràna ny fanarahana ny fantsona fahitalavitra toy ny #AlJazeera . http://bit.ly/gVVyIf #feb17  [Avy amin'ny mpandika : ny fatwa dia toy ny didy ara-pivavahana avoakan'ireo mpitarika]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/26/13672/
 Fitroarana Libia 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/libya-uprising-2011/
 @aratweets: : http://twitter.com/aratweets/status/41120760886083585
 Qaddafi : http://search.twitter.com/search?q=%23Qaddafi
 @Heyett: : http://twitter.com/Heyett/status/41032143245152256
 @IHHen: : http://twitter.com/IHHen/status/41100256510742528
 http://bit.ly/gVVyIf : http://bit.ly/gVVyIf